किन होटलमा बिछ्याइन्छ सेतो तन्ना? यस्तो छ कारण | Suvadin !
किन होटलमा बिछ्याइन्छ सेतो तन्ना? यस्तो छ कारण
प्रत्येक होटलमा ग्राहक सबैभन्दा पहिला रोजाइ नै सफाइ हुन्छ। सेतो तन्ना सबैभन्दा सफा देखिन्छ। सेतो तन्ना ओछ्याउनुको पहिलो कारण भनेको सफा देखाउनका लागि हो। ग्राहकले कोठाको सफाइ देखेर कोठा बुक गर्छन भन्ने विश्वास होटलव्यवसायीको रहेको छ।सेतो तन्नामा केही झर्यो भने दाग बस्छ। यसकारण ग्राहकले खाने पिउने बेलामा पनि निकै ध्यान राख्छन्। सेतो कपडामा ब्लीच सजिलै हुन्छ। ब्लीजले सेतो तन्नामा चमक आउँछ। सेतो रंगले मनलाई शान्त बनाउँछ। सेतो तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निद्रा पर्छ। सेतो तन्ना होटलमा यस कारण ओछ्याइन्छ की ग्राहकले रिल्याक्स गर्न सकुन्।
Aug 08, 2018 16:36
काठमाडाैं, २३ साउन – होटलका कोठा हुन् वा धर्मशाला, प्राय स्थानमा सेतो तन्ना नै ओछ्याइएको हुन्छ। कहिल्यै मनन् गर्नु भएको छ होटलका बेडमा किन सेता तन्ना नै विछ्याइन्छ होला भनेर? सबैभन्दा छिटो महिलो हुने र फोहोर देखिने रंग नै सेतो हो।
प्रत्येक होटलमा ग्राहक सबैभन्दा पहिला रोजाइ नै सफाइ हुन्छ। सेतो तन्ना सबैभन्दा सफा देखिन्छ। सेतो तन्ना ओछ्याउनुको पहिलो कारण भनेको सफा देखाउनका लागि हो। ग्राहकले कोठाको सफाइ देखेर कोठा बुक गर्छन भन्ने विश्वास होटलव्यवसायीको रहेको छ।
सेतो तन्नामा केही झर्यो भने दाग बस्छ। यसकारण ग्राहकले खाने पिउने बेलामा पनि निकै ध्यान राख्छन्। सेतो कपडामा ब्लीच सजिलै हुन्छ। ब्लीजले सेतो तन्नामा चमक आउँछ। सेतो रंगले मनलाई शान्त बनाउँछ। सेतो तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निद्रा पर्छ। सेतो तन्ना होटलमा यस कारण ओछ्याइन्छ की ग्राहकले रिल्याक्स गर्न सकुन्।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्य रंगको तुलनामा सेतो रंगको तन्नामा सुत्दा राम्रोसँग निन्द्रा लाग्छ। र, बारम्बार ब्युझिदैनन्। र, विहान उठ्दा फ्रेश अनुभव हुन्छ।
१९९० सम्म होटलमा रंगीन बेडशीट प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यो बेला रंगीन बेडशीटको प्रयोग दागलाई लुकाउन र ग्राहकलाई खुशी बनाउनका लागि गरिन्थ्यो। तर, पछि वेस्टिन होटलका डिजाइनरले ग्राहकका लागि आलिशान ओछ्यान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा खोजी गरे। त्यसपछि सेतो तन्ना सबैभन्दा राम्रो विकल्पका रुपमा अघि सारियो। त्यसपछि होटलमा सेतो तन्नाको प्रयोग गर्न थालिएको हो।